Maxaa ku dhex maray Tababarka Manchester United labadaan Nin ee Colka ah?Sawiro | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Maxaa ku dhex maray Tababarka Manchester United labadaan Nin ee Colka ah?Sawiro
Published on September 26, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(27-9-2018) Kadib maalmo qilaaf ah isla markaana ay qayb qaadatay Warbaahintu waxaa markale xerada Tababarka Manchetser United ku kulmay Jose Mourinho iyo Paul Pogba Subaxnimadii hore ee Arbacada.
Waxay ahayd Maalin Guuldaro oo Manchester United waxaa habeenkii laga reebay koobka Carabao Cup.kadib markii ay Rigoorayaal 8-7 ah ay kaga badisay kooxda Heerka labaad ee Derby County mana jirin farxad iyo fur furnaan Cayaartoyda ka muuqatay iskaba daa Ragaan dagaalsan ee Jose ,Mourinho iyo Paul Pogba balse sida lasheegay jawiga ayaa marqura isku badalay Farxad markii ay wada hadleen.;
Wargeyska Sky Sports ayaa baahiyey Video 2 daqiiqo ah kaas oo muujinaya Paul Pogba oo Salaamaya Macalin ku xigeenka Michael Carrick kadibna Salaamaya Macalin Jose Mourinho kadibna Macalinka ayaa bilaabay in uu lahadlo Pogba isaga oo kuyiri iska iloow wax kasta oo qilaaf ah una shaqee si daacad Madaxa ayuu ruxay waxaana muuqata in uu aqbalay hadalka Macalinkiisa.
Paul Pogba ayaa dhawaan loo sheegay in uusan dib danbe u Noqon doonin Kabtanka kooxda kadib markii uu sheegay in uu ku laaban doono Juventus taas oo uu ka caroodey Jose Mourinho sidoo kale Xiddiga dalka France ayaan Cayaarin kulnkii Carabao Cup. ee dhacay habeenkii Arbacada.waxaase lafilayaa in uu jiro isku soo dhawaansho ay ku dhamaynayaan qilaafka adag ee u dhexeeya labada Nin.